घट्यो बजेटको आकार, पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत मात्रै
बिजखबर संवाददाता २०७६ माघ २९ (February 12, 2020) मा प्रकाशित
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवरा खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट घटाएका छन । चालु आवको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै मन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई घटाएर १३ खर्ब ५० अर्बमा पुर्याएको बताएका हुन ।
चालु आवको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य, आर्थिक बृद्धि लगायतको बारेमा जानकारी दिएका थिए । चालु आवको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै उनले चालु आवमा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतमात्रै हुने बताएका छन ।
यस्तै उनले कुल खर्च ९० प्रतिशत र राजस्व संकलन ९० दशमलव ५ प्रतिशत हुने बताएका छन ।
उनका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा ४ खर्ब ५६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै चालु आवमा कर राजस्वको वृद्धि ९ प्रतिशत र गैरकर राजस्वको वृद्धि ५० प्रतिशत रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै यो बर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पछिल्लो ६ महिनामा २० अर्ब २० अर्ब ४१ करोड अर्थात १९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
फागुन मसान्तभित्र बजेट बाँडफाँटको निर्णय गरिसक्नुपर्ने अर्थको निर्णय, थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाई
पुनः विज्ञ कोटामा राष्ट्रिय सभामा आउँदै डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्रीमा उनकै निरन्तरता !
अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन- ‘निजी क्षेत्रका गुनासा सुन्दा-सुन्दा दिक्क लागिसक्यो’
अर्थतन्त्र गौरव गर्न लायक बाटोमा छ, मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा : अर्थमन्त्री
सहुलियत कर्जामा अर्थमन्त्रीको चासो, बैंकलाई नाफामुखी बन्न छाडेर व्यवसायी मैत्री हुन निर्देशन
अर्थमन्त्री भन्छन–‘विमानस्थल, रेलवे र फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुन दिदैनौं’
प्रधानमन्त्री धनी कि अर्थमन्त्री ?, यस्तो छ सम्पती विवरण
लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको सुझाव, ‘सेयर बजारमा जोखिम बढि छ, जोखिम मोल्न सक्नेले मात्र लगानी गर्नुस’
विश्व सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गुमाए ३ लाख करोड डलर, कोरोना भाइरस कारण
पर्यटक आगमनमा कमी आउँदा ठमेल सुनसान, होटल अकुपेन्सीमा तीव्र गिरावट
चार दिनपछि निगमको जहाज नारिता उड्दै, रातको १ बजे हुनेछ काठमाडौंबाट १५ घण्टे उडान
लगानीकर्ताले नरुचाएका अर्थमन्त्री खतिवडालाई बामदेबले देखाए बर्हिगमनको बाटो, अब कसको पोल्टामा जाला अर्थमन्त्रालय ?
विश्वमा सबैभन्दा धेरै विक्री हुने एन्ड्रोईड स्मार्टफोनमा सामसुङको दबदबा, कस्तो छ अरुको बजार ?
दुई रिफाईनरीमा ग्याँस आयात घटेपछि बजारमा ग्याँसको अभाव, सहज हुन अझै १५ दिन लाग्ने
सरकारले बढायो विकास कर, अब डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ विकास कर
के भने चन्द्र ढकालले उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा ? सम्बोधनको पूर्णपाठ